Nin miisaankiisa laga naxayo oo sheegay inuu diidey gabdho badan iyo sababta - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Nin miisaankiisa laga naxayo oo sheegay inuu diidey gabdho badan iyo sababta
Arbaab Khaysar waa nin aad u culus oo miisaankiisa laga naxayo una dhashay dalkaasi Bakistaan. Waxa lagu yaqaanaa inuu gawaadhida hal gacan ku dalaco cagafyadana uu ku jiido xadhig. Da’diisu waa 27 jir waxana miisaankiisu yahay 444kg.
“Waxaan diidey haween badan oo miisaankoodu yahay ilaa 100kg, waxaan u baahanahay naag aad u culus oo ilaa 200kg noqonaysa waayo ma rabo inaan dhaawaco ayuu yiri Arbaab oo raaciyay in waalidkiisu ku jiraan raadcada maadaama dhaqanka dalkaasi yahay in waalidku doonaan.
“Haweenka ilaa hadda la ii soo bandhigey waa wada caato sida caadiga ahna haweenka badankooda facayga maaha ayuu yiri Arbaab.
Sidee miisaankiisa ku ilaaliyaa
“Waxaan cunaa 36 xabo oo digaaga, 3kg oo hiliba iyo 5 litir oo caana ah. Waxayse u muuqataa in miisaanka intaas leeg aanu baryahaa ku helayn haweenay u dhiganta. Waxase shiki ku jirin in magaalada uu degan yahay aad looga xiiseeyo.